GV Face: Mibodo ny Hoavin’i Bolgaria Ny Mpianatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2013 21:44 GMT
Nibodo ireo oniversite lehibe indrindra tao amin'ny fireneny ireo mpianatra Bolgara, izay nampiato ny fampianarana tao anatin'ny herinandro vitsy lasa. Anisan'ny hetsi-panoherana governemanta izay nanozongozona ny firenena nanomboka tamin'ny volana Jona ny fikomian'izy ireo, mitaky ny fametraham-pialàn'ny governemanta noho ny fihanaky ny fahantrana sy ny kolikoly.
Amin'ny GV Face amin'ity Zoma ity, hiresaka momba ny hoavin'ny fihetsiketsehan'ny mpianatra miaraka amin'ireo mpanoratra avy ao Bolgaria Rayna St (@MaliciaRogue), Nevena Borisova sy Ruslan Trad (@ruslantrad), ary miaraka amin'ny tonian-dahatsoratra avy Eoropa Afovoana sy Atsinanana Danica Radisic (@NikiBGD) isika.
Nampanantena ireo mpikarakara ny fibodoana tampoka farany teo fa tsy hifampikasoka mihitsy amin'ny hery politika ao amin'ny firenena izy ireo. Nanomboka ny fahirano nataon'izy ireo raha nibodo ny efitra lehibe indrindra fianaran'ny daholobe tao amin'ny oniversite antitra indrindra sy malaza indrindra tao an-drenivohitra Sofia ireo vondrona mpianatra tafintohina.
Nomarihan'ireo fandoroan-tena misesisesy hatramin'ny fiandohan'ny taona ny fahadisoam-panantenan'ireo Bolgara maro. Farafahakeliny olona sivy no nandoro tena namoy ny ainy tamin'izany.
Tamin'ny 10 Novambra, Bolgara an'arivony no nidina an-dalambe mba hanamarika ny andro faha-150n'ny hetsi-panoherana ny governemanta, ary nihiaka hoe ” mialà “, ” mafia ” sy ny hoe ” mba mahalalà menatra ” tamin'izy ireo nandalo tao amin'ny antenimiera.
Hangout-n'ireo mpandray anjara:
Namana mpikaroka manana doktorà (PhD) tao amin'ny Oniversite Descartes Paris i Rayna, manasokajy ny tenany ho mpankafy ny aterineto (geek) sy mpijirika (hacker) DIYbio, miasa hanatratrarana ny miralenta eo amin'ny sehatry siansa sy ny teknolojia izy. Tonian-dahatsoratra ao amin'ny Global Voices bolgara ihany koa izy, mpikambana ao amin'ny Bioinfo -fr.net sy anisan'ny mpitantana ny vondrona frantsay ao amin'ny Fikambanana Open Knowledge Foundation.
Bilaogera Syriana-Boligara kosa i Ruslan. Izy no mpanorina ny @arabculture sy mpiara-manorina ny Global Voices amin'ny teny bolgara.
Manana bakaloreà amin'ny asa fanaovan-gazety tao amin'ny oniversite Sofia kosa i Nevena, ary nianatra momba ny fandinihana fiarahamonina (sosiolojia) ho taranjam-pianarana faharoa eny amin'ny oniversite. Tonian-dahatsoratra misahana ny vaovao iraisam-pirenena tao amin'ny Sampam-pahalalam-baovao bolgara Focus no asany nandritra ny roa taona ary tonian-dahatsoratra sy mpanoratra ao amin'ny Fahitalavi-panjakana bolgara nandritra ny roa taona ihany koa izy. Eo am-pikarakarana mari-pahaziana Master amin'ny Haisoratra, Kolontsaina ara-maso sy Sarimihetsika ary ny fampivelarana ny fitantanana mpiasa izy ankehitriny.
Tonian-dahatsoratra ao Eoropa Afovoany sy Atsinanana kosa i Danica. Miteny serba, anglisy ary portiogey misosasosa tsara izy. Teratany Serba, teraka sy lehibe tao amin'ny saikanosy Iberiana izy, ary niaina fotoana fohy tao Afovoany-Atsinanana sy Etazonia.